Internet Download Manager ကို Full Version ဖြစ်အောင် install လုပ်နည်း ~ နည်းပညာခ၇ီးသည်
အင်အားကြီးမားသော နည်းပညာ၇ှင်နှင်.နည်းပညာလေ.လာလိုက်စားနေသူ တို.သည်မိမိတို.သွားမည်.နည်းပညာလမ်းကြောင်းပေါ် မိမိတို.ဘာသာ(အားဖြင်.)ဖောက်ထွှင်းသွားတက်ကြသည်
တင်သမျှ အကုန် သည်မှာ
Sky pe mp3တရားတော်
Internet Download Manager ကို Full Version ဖြစ်အောင် install လုပ်နည်း Friday, January 18, 2013
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ တောင်းဆိုတာလဲ များနေတဲ့အပြင် တော်တော်များများလဲ အဆင်မပြေသေးတဲ့ IDM ကို Full Version ဖြစ်အောင်မသုံးတက်သေးတဲ့ သူတွေအတွက် Keygen နဲ့ Patch File အသုံးပြုနည်းရယ် ၊ အဲ့ဒါတွေကို အသုံးမပြုမှီ ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာရယ် မိမိစက်မှာ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Downlaod Manager က Update မဖြစ်ဖူးဆိုရင် ဘယ်လို Update ပေးပြီး Full Version သုံးလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ် ရမယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ် Install
လုပ်နည်းကအစ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်.. ဒီနေရမှာ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာကိုပဲ အဓိကရေးပေးသွားမှာပါမယ် .. တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့လဲ စာရေးရတာ တော်တော်စဉ်းစား နေရပါတယ်.. တစ်ချို့က ကွန်ပျူတာ နဲ့ပါတ်သတ်ရင် သုံးတက်တာကလွဲပြီး Software
ပိုင်းတွေ နဲ့ပါတ်သတ်ရင် လုံးလုံးကိုနားမလည်တဲ့ သူတွေရှိပါတယ် .. ကျွန်တော်အနေနဲ့ အများစုအဆင်ပြေအောင် အတက်နိုင်ဆုံးတော့ ပုံလေးတွေနဲ့အဓိက ထားပြီး ရေးပေးနေတာပါပဲ.. တကယ်လို့မိမိတို့က ကွန်ပျူတာအခြေခံ လုံးဝမရှိသေးလို့ နားမလည်ဘူးဆိုရင်တောင် ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်.. စမ်းမကြည့်ပဲနဲ့ ဘာတွေရေးထားမှန်း နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး .. ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်တိုင်ကြိုးစား အားထုတ်မှုလေးတွေတော့ လိုအပ်တာအမှန်ပါပဲ.. ဘာမှမသိဘူးဆိုပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲနေရင်တော့ ဘာမှသိလာမှာလဲမဟုတ်ပါဘူး ..
အနေနဲ့ ပို့စ်တွေကို ပုံတွေနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ ပြင်ဆင်ရတာ အရမ်းအချိန်ပေးရပါတယ်.. စာရေးတယ် ဆိုတာက ကိုရေးချင်တာကို ချရေးရတာ တစ်ခုထဲဖြစ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်.. ပုံတွေနဲ့ရှင်းရတဲ့ အခါကျတော့ ပုံတွေကို Record လုပ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရတယ်.. ပြီးရင် တစ်ခါကိုလိုချင်တဲ့ ပုံစံလေးတွေ ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ရတယ် နောက်ပြီး ပို့စ်တင်တဲ့အခါ ပုံတွေကို Upload
ပြန်တင်ရတယ်.. အရမ်းအချိန်ပေးရသလို ကျွန်တော်လဲ ပင်ပန်းပါတယ်.. ကျွန်တော်အနေနဲ့ အားလုံးကို အဆင်ပြေစေချင်လို့ အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ပေးရတာပါ
ဒါကြောင့် ကြိုးစားပြီး လိုက်လုပ်ပေးပါလို့ပဲ ကျွန်တော် တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ.. အရင်ဆုံး ကျွန်တော် Internet Download Manager 6.05 ကို Keygen သုံးပြီး Full Version ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ် ရမယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါမယ်.. အရင်ဆုံး Internet Download Manager ကိုစပြီး မိမိတို့စက်မှာ Install မလုပ်ခင် Registry ထဲမှာ အရင် Trail Version သုံးခဲ့တုန်းက ကျန်ခဲ့တဲ့ Key File တွေ အစအန လေးတွေကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ပြထားသလို ရှင်းပေးလိုက်ပါ.. တကယ်လို့ ကျွန်တော် တို့က Registry ထဲမှာ မရှင်းခဲ့ဘူးဆိုရင် Patch ချိုးတဲ့အခါမှာ Internet Download Manager ကိုအသုံးပြု နေပါတယ်ဆိုပြီး Error တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်.. တကယ်လို့ Internet Download Manager ကိုခုမှ စပြီး Install လုပ်မှာဆိုရင်တော့ တန်းပြီး Install လုပ်လို့ရပါတယ်..
အပေါ်ကအဆင်အတိုင်း Registry ထဲမှာရှင်းပြီးပြီဆိုရင် My Computer >> Local Disk ( C : ) >> Program File ထဲမှာ Internet Download Manager ဆိုတဲ့ Folder ရှိမရှိရှာလိုက်ပါ.. တကယ်လို့ တွေ့တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကောင်လေးကို Delete လုပ်ပေးလိုက်ပါ.. တကယ်လို့ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ Delete လုပ်ပေးစရာမလို တော့ပါဘူး.. ကျွန်တော် တို့အပေါ်က အဆင့်တွေတိုင်း ရှင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Internet Download Manager ကိုစပြီး Install လုပ်လို့ ရပါပြီ..အောက်မှာ ကျွန်တော် Install လုပ်နည်းကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်..
အပေါ်ကပုံအတိုင်း Patch File လေးကို Copy ကူးပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း My Computer >> Local Disk ( C: ) >> Program File အထိအဆင့်ဆင့်သွားပြီး Internet Download Manager ဆိုတဲ့ Folder ထဲမှာ Paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. အပေါ်ကပုံအတိုင်း Patch File လေးကို Double Click ပေးလိုက်ပြီ ဆိုရင် အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော်တို့က Patch ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ .. အပေါ်က ပုံအတိုင်း Patch ချိုးပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ IDM လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ .. Full Version လေးဖြစ် သွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..
နည်းပညာခ၇ီးသည် အတွက်လက်ဆောင်စကားလေး တစ်ခွန်းလောက် ပြောခဲ့ပါလား
"မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ နည်းပညာလမ်းကြောင်းပေါ်က သူငယ်ချင်းများ ကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ နည်းပညာခ၇ီးသည်ကို လာေ၇ာက်လည်ပတ် လေ.လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ˜*•. ˜"*°•.˜"*°•.˜"*°•.•°*" ˜.•°*"˜.•°*"˜ .•*˜ ခင်မင်ရင်းနှီးရပါသော…
"မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ နည်းပညာလမ်းကြောင်းပေါ်က သူငယ်ချင်းများ ကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ km2amsc.blogspot.com ကို လာေ၇ာက်လည်ပတ် လေ.လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ˜*•. ˜"*°•.˜"*°•.˜"*°•.•°*" ˜.•°*"˜.•°*"˜ .•*˜ ခင်မင်ရင်းနှီးရပါသော"
ကျွန်တော်နည်းပညာခ၇ီးသည်ဆိုက်ကို တည်ထောင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မသိသေးတဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာဖို့အတွက်ပါ။ ဒီပို့စ်လေးတွေက ကျွန်တော်လေ့လာဖတ်ရှုတဲ့ စာအုပ်တွေ ဆိုဒ်တွေကကူးယူထားတာပါ. ဒီဘလော့လေးက ကျနော့်အတွက် မှတ်စုစာအုပ်လေးပါပဲ..လာလည်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Rangoon Time ပြက္ခဒိန်
Copyright © 2012နည်းပညာခ၇ီးသည် | မူပိုင်ရေးသူ>> ကိုလတ်(နည်းပညာ). Powered by Blogger.
ဘလော့ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေဖို့ နည်းလမ်းလေး
♥ ♥ ♥ ကျော်ခွရန် Proxy ဆိုင်ရာများ ♥ ♥ ♥♥ backfox.com♥ Facebookunblock.biz♥ Mistakeproxyarea♥ Balloonscape.com♥ Polysolve.com♥ Surfall.net♥ Polysolve.com ♥ Webuzz.im♥ Breakfence.com♥ Hybridstormlabs.com♥ Vpntunnel.net♥ Surfwecan.com♥ Unblockwebsense♥ Ibypass.org♥ Backfox.com♥ Ibypass.us♥ Atlantadata♥ Backfox.com♥ Moblehost.com♥ Whitehost.info♥ Trytux.com♥ Hidemyass.com♥ Ibypass.name♥ Melloyello.org♥ Unblockbess.com♥ Poweraid.info♥ Greenrabbit.org♥ Powerdedicated.info♥ Cacheless.org♥ Proxcool.com♥ Unmetereddedicated.info♥ Sneaking.org♥ Saselinux.com♥ Atlantanap.info♥ Ibypass.com♥ Azurf.com♥ Wireone.info♥ Facebookprox.inf♥ Diyrollercoaster.com♥ Proxy.org/cgi_proxies.shtm♥ Boxhost.info♥ Ibypass.net♥ Unmeterededicated.info♥ Ninjacloak.com♥ Worldsbesthost.info♥ Btunnel.com♥ Xtrahost.info♥ Ctunnel.com♥ Highendhost.info♥ Dtunnel.com♥ Balloonscape.info♥ Geotunnel.com♥ Internetfilter.be♥ Megabandwidth.info♥ Mariettalighting.info♥ Bypassunblock.net♥ Iibypass.biz♥ Mmproxy.tk♥ Proxy101.tk♥ Freeproxy.ro♥ Polysolve.com♥ Keygens.wall.fm♥ Proxynaungnaung.appspot.com♥ www.nayzawlin1.com ♣ ♣ ♣ သတင်းနှင့် ဆိုင်ရာများ ♣ ♣ ♣ ♣ BBC♣ သူရိယ♣ ဟင်းလေးအိုး♣ လင်းယုန်♣ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များမဟာမိတ်♣ Eleven♣ VOA♣ မဇ္ဈိမ♣ ရတနာပုံ ♣ ဟစ်တိုင်♣ ဟံသာဝတီ♣ ဧရာဝတီ♣ လမ်းသစ်♣ ကန္တာရ၀တီတိုင်း♣ ကေအိုင်စီ♣ ခေတ်ပြိုင်♣ ရခိုင့်တံခွန်ဂျာနယ် ♣ Freedomnewsgroup♣ Thevoicemyanmar♣ သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်♣ Rfa♣ www.nayzawlin1.com ♠ ♠ ♠ မဂ္ဂဇင်း နှင့် ဂျာနယ်ဆိုင်ရာများ ♠ ♠ ♠ ♠ ကြေးမုံ♠ ရွှေစကား♠ မြန်မာ့အလင်း♠ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်လေး♠ Popularmyanmar♠ မိုးသောက်ကြယ်♠ Planet Myanmar♠ ခေတ်လူငယ်♠ ဈေးကွက်ဂျာနယ်♠ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်♠ All Channel For Myanmar♠ အင်တာနက်ဂျာနယ်♠ People Online Magazine♠ အောင်မြင်ခြင်းမဂ္ဂဇင်း♠ Myanmar today (by English)♠ မြန်မာတိုင်း(စ်)ဂျာနယ်♣ www.nayzawlin1.com ! ! ! ဘာသာရေး ဆိုင်ရာများ ! ! !! မဟာစည်-၁! မဟာစည်-၂! ဓမ္မစာအုပ်များ! အရှင်ဆန္ဒာဓိက! ဖြူးဆရာတော်! တရားတော်များ! အရှင်ဥတ္တမသာရ! ဓမ္မ MP3 ဒေါင်းလုပ်! တထာဂတ ရိပ်သာ! သန္တိသစ္စာ, LA! ဖားအောက်တောရ ရိပ်သာ! ဖားအောက်တောရ ရိပ်သာ USA! ဖားအောက်တောရ ရိပ်သာ! မေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရ! မြတ်ရတနာ! Dhamma Sukha! Panditarama Sydney! Panditarama Manchester! Queensland Burmese! Vipassana M, Centre! Ven. Dr. Pannadipa! Birmingham Buddhist! Oxford Buddha Vihara! Sasana Ransi Vihara, uk! Tisarana တိသရဏ! Dhamma dipa! Sae taw win 2! Insight Meditation! မဒိုင်ကျင်းရွာမှ ကြိုဆိုပါ၏! သီရိလင်္ကာရောက် ဆရာတော်များ! Dhamma Journal! Dhamma Online! Dhamma! Buddha net! ထေရ၀ါဒလူငယ်များ! Buddhismo Theravada Hispano!တရားတော်! ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန်ပွားရေး! Triplegem.net! သဲအင်းဂူ ရိပ်သာ! Ministry of Religious Affairs! ဦးဥတ္တမသာရ! ထားဝယ် ဆရာလေး! အနတ္တလက္ခဏာ ၃-ဘာသာ! Dhamma Download! ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်! GBL! ဗုဒ္ဓဒေသနာဝေါဟာရ! သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန်! ယောအသင်း! ကသစ်ဝိုင်တရားရိပ်သာ! ဓမ္မရံသီလူငယ်ဝတ်အသင်း! တောက်ပကြယ်စင်! ကြုံရာဆုံရာ(မိုးသောက်)! သဲအင်းဂူဆရာတော်! အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ! အရှင်ကောဝိဒ-မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်! ဖားအောက်တောရဆရာတော်! ဆရာဦးမြင့်လွင်-သန့်တည်ပွား! မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး! အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးအသင်း! မိုးကုတ်ဝိပဿနာပြန့်ပွားရေး! မြန်မာပြန် တိပိဋကတ်! နိဗ္ဗာန်! ပါရမီ ပိဋကတ်တော်! နိဗ္ဗာန်ဓမ္မ! E Dhamma! VRI Dhamma Video! Appamada- အပ္ပမာဒ! ရွှေပါရမီတောရ! မိုးကုတ်ရိပ်သာ MIMC USA! မိုးကုတ်ရိပ်သာ London! ဗမာထေရ၀ါဒ၊ (နော်ဝေး)! ဆရာကြီးဦးဘခင် ရိပ်သာ! စင်္ကာပူ ဘုန်းကြီးကျောင်း! Burmese Classic! သာသနာရေးဌာန! တိပိဋကတ် ကျောက်စာဋ္ဌာန! မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး! သီတဂူ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ! လူသားဗုဒ္ဓ! ဓမ္မာနန္ဒ၀ိဟာရ USA! Nibbana! Global Pagoda! အရိုင်းပန်း! မဟာစည်ရိပ်သာ (USA)! ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ! Dhamma Lecture VCD! ရွှေဟင်္သာ! ဓမ္မဒါန! ပရိတ် ပဋ္ဌာန်းတရားတော်♣ www.nayzawlin1.com♀ ♀ ♀ ဘောလုံး နှင့် ဆိုင်ရာများ ♀ ♀ ♀♀ SoccerMyanmar♀ mutdfan♀ MyanmarNationalLeague♀ kbzfc♀ first-11♀ ရတနာပုံ အက်ဖ်စီ♀ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်♀ ဘောလုံးပွဲ High Live♀ ဘောလုံးပွဲသတင်း♀ ဘောလုံးပွဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန်♀ ပရီးမီးယားလိဒ် ပွဲစဉ် နှင့်သတင်းများ♀ ဘောလုံးပွဲ သတင်းများ♀ မြန်မာဂိုး♀ သရဲနီတို့ပျော်စံရာ♀ ကြိုးကြာနီတို့ဆုံမှတ်♀ မြန်မာချဲလ်ဆီးဖန်များ♀ ဒီဗီဘီ♣ www.nayzawlin1.com ► ► ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယိုနှင့် သီချင်းများ ► ►► ရွှေဗွီဒီယို► ထိန်လင်းဗွီဒီယို► သံစဉ်လှိုင်း► Burmeseclassic► FM သီချင်းလေးတွေ► Movie.myanmar ► Myanmarmp3► ခရမ်းပြာအိမ်မက်► Myanmarmp3album► မင်းသီလမြန်မာဗွီဒီယို► ရွှေအိပ်မက်မြန်မာရုပ်ရှင်► မြန်မာသီချင်းများ(မဇ္ဇူရီ)► Music.Thingyan► ရွှေမြန်မာသီချင်းဆိုက်► မြန်မာ-နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်များ► မြန်မာရုပ်ရှင်သီချင်းများ► မြန်မာရုပ်ရှင်သီချင်းများ► Myanmar song.net► Myanmarhiphopchannel► ရွှေအိုး(မြန်မာနှင့်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်)♣ www.nayzawlin1.com $ $ $ နည်းပညာ ဆိုင်ရာများ $ $ $ $ Htmlbasix$ Tizag$ ကိုဇော်$ ကိုစံပီး$ ဖိုးသား $ ကိုကြီး$ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ$ ညီနေမင်း$ မနောသား$ ကိုမုန်တိုင်း$ သံလုံငယ်$ Kp3family$ ကိုစိုင်းဇော်ခါး$ ကိုရင်ပြည့်စုံ$ ကိုသားကြီး$ ကိုသီဟဇော်$ ကိုကျော်မြင့်ထူး$ မာကို့စ်$ မောင်ပညာ$ ပုံဂံသားမောင်ကျော်$ ကိုမြတ်$ ဘသားချော$ မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)$ ကိုဇောင်း$ ကြယ်စင်မင်း$ သူရထွန်း$ ဂီတနဲ့နည်းပညာ$ ကိုရန်အောင်$ မိုးထက်မြင့်ဘုရင့်နောင်$ မောင်စေတနာ$ မြန်မာအိုင်တီသမား$ အိုင်တီခရီးသည်$ Centricle.com/tools/html-entities$ Blogdoctor$ Html-color-codes$ w3schools♣ www.nayzawlin1.com♂♂ ♂ E-book ဆိုင်ရာများ ♂ ♂ ♂♂ နည်းပညာ စာကြည့်တိုက်♂ စကားဝါမြေ အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်♂ ကိုရန်နိုင်ဦး♂ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်♂ မြန်မာ ၀တ္ထူစာအုပ်များ♂ တရားတော်များ♂ စာအုပ်များ♂ ချမ်းလင်းနေ♂ နည်းပညာစာကြည့်တိုက်♂ Myanmar Ebooks ♂ ချယ်ရီမြို့တော် စာကြည့်တိုက်♂ ၀ိညာဉ်သစ်♂ သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း♂ အိပ်မက်လှိုင်း စာအုပ်စင်♂ ငုရင်ပြင်♂ အဖြူရောင်သံစဉ်♂ CCG :: BookShelf (စာအုပ်စင်)♂ မောက္ခ♂ နေ့သစ်♂ Saffron People’s Movement♂ Myanmar Friendster Forum♂ ဗမာ့ကြယ်♂ နေပြည်တော်♂ emokozin စာအုပ်စင်♂ စာအုပ်စင်♂ Faces Magazine♂ ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာ♂ သရဖူ♂ ပညာ့မဏ္ဍိုင် ♂ စာအုပ်စင် E-Book(1)♂ ခြိမ့်ထက်၏ သတင်းကုထုံး ♂ Eastwin Burma ♂ Lwint Maung Maung's Diary♂ ပေဖူးလွှာ♂ မြန်မာ E-Library♂ မြန်မာလို နည်းပညာစာအုပ်များ♂ E-books များ♣ www.nayzawlin1.com♂♂ ♂ ဂျာနယ်များဖတ်ရှုရန် ♂ ♂ ♂အင်တာနက်ဂျာနယ်7daynews ဂျာနယ်weeklyeleven ဂျာနယ်ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ်အလင်းတန်းဂျာနယ်MyanmarTimeဂျာနယ်အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်ဧရာဝတီဂျာနယ်ရွှေအမြူတေဂျာနယ်မြန်မာဘောလုံးEleven ဂျာနယ်Flower News ဂျာနယ်
NewNews Blogger Template - Without slider.xml - 123 KB
တစ်ခုခုပြောခဲ.ပါလား Chatboox မှာ
နည်းပညာခ၇ီးသည်(ကိုလတ်) သည်ပြည်ပသို.သွားေ၇ာက်နေပါသဖြင်. ဆိုက်မှာပို.အသစ်များတင်နိုင်ခြင်းမ၇ှိသေးပါ
ကျနော်ဆိုက်ကို အောက်ပါလင်.များမှာမိမိကြိုက်နှစ်သက်သောလင်.ကနေ တိုက်၇ိုက်
Free ရသော Site များ
Google Voice နှင့် GTalk
Copyright © 2013 နည်းပညာခ၇ီးသည် | မူပိုင် အောင်ကိုလတ်